China Umbala ofanayo Isakhelo seAluminiyam kunye negqabi locango lwe-HPL laminate lokugungxula umnyango wesibhedlele Imveliso kunye neFactory | Ezong Iqela
Umbala ofanayo Isakhelo seAluminiyam kunye negqabi lomnyango we-HPL laminate ugungxula umnyango wesibhedlele
Thetha ngeengenelo zokucoca iingcango.
1. Izinto eziphathekayo zihambelana nokusingqongileyo kwaye zisempilweni.
2. Nciphisa ukusetyenziswa kweenkuni.
Kuyinto ehambelana nokusingqongileyo ukusebenzisa umnyango ococekileyo xa kuthelekiswa nomnyango wokhuni, kuba iqabunga lomnyango womnyango ococekileyo ligcwele i-honeycomb yephepha okanye i-honeycomb ye-aluminium. Ngenxa yesakhiwo esikhethekileyo se-honeycomb core, ine-insulation efanelekileyo yokushisa, ukugquma isandi, ukumelana nobushushu, ukuxhathisa ukubola, kunye nemiphumo yokugcina ubushushu. Ngoko ke, kuqheleke kakhulu ukuba iingcango ezicocekileyo zizaliswe nge-honeycomb yephepha okanye i-honeycomb ye-aluminium. Ukusetyenziswa kweengcango ezicocekileyo kunokuba kakhuluukunciphisa ukusetyenziswa kweenkuni, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kweenkuni nako luncedo olukhulu ekukhuselweni kwendalo.
3. Iiparamitha zokusebenza ngokubanzi zomnyango ococekileyo zibalaseleyo.
Ineempawu zenkangeleko ecocekileyo, ukuba tyaba okuhle, ukomelela okuphezulu, ukuxhathisa kokutya, akukho luthuli, akukho luthuli, kwaye kulula ukuyicoca. Kwaye kulungele kwaye ngokukhawuleza ukudibanisa. Isebenza kakhulu kuba ububanzi besakhelo socango esitsha sinokuhlengahlengiswa kwaye ukusebenza kokutywinwa kulungile.
4. Ukunyamezela imveliso kuncinci.
Umphezulu womnyango ococekileyo wenziwa ngumatshini omkhulu we-hydraulic kunye nefuthe elinamandla lesithathu. Izimbo ezahlukeneyo ziyafumaneka. Kwaye ukuqina komnyango ngamnye oveliswayo kuyahambelana kakhulu.
5. Imveliso iyasebenza.
Umnyango ococekileyo uneenzuzo zamandla aphezulu, akukho deformation, kwaye ihlala ixesha elide. Xa kuthelekiswa neengcango zokhuni, ineenzuzo ezininzi, ngoko ithandwa ngabantu.
6. Umnyango ococekileyo kulula ukuyifaka.
Emva kokuba imveliso iveliswe, inokufakwa kwaye isetyenziswe. Akuyi kuthiwa iphunga lepeyinti liya kuhlala emva kokuba umnyango ugqityiwe. Emva kokufakela, akukho ngcoliseko kwaye akukho vumba eliseleyo, elivumela abathengi ukuba bayisebenzise ngoxolo lwengqondo.
7. Ixabiso elihle / umlinganiselo wokusebenza.
Nangona ixabiso leengcango ezicocekileyo liphezulu kuneengcango eziqhelekileyo zokhuni okanye ezinye iintlobo zeengcango. Nangona kunjalo, indawo apho umnyango ococekileyo usetyenziswa khona ukhethekileyo, ongcono kumgangatho wemveliso kunye nezixhobo kunye nezinto ezisetyenzisiweyo.
Ngaphambili: ucango lwethiyetha kwindawo yonyango
Okulandelayo: Anti bacteria HPL gungxula laminate Ucango esibhedlele kunye nelebhu
CT scan igumbi
ISO isiqinisekiso segumbi elicocekileyo locango lokuvala ucango ...